भगवानको किंगडमको मूल्य - विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड
मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2019-01 > परमेश्वरको राज्यको मूल्य
परमेश्वरको राज्यको उच्च मूल्य
मार्क १०: १ 10,17--31१ का पदहरू मार्क to देखि १० सम्मको खण्डका हुन्। यो खण्ड "भगवानको राज्यको उच्च मूल्य" शीर्षक दिन सकिन्छ। यसले पृथ्वीमा येशूको जीवनको अन्त्य हुनुभन्दा अघि भएको समयावधिलाई वर्णन गर्दछ।
येशू र प्रतिज्ञा गरिएको मसीह उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर पत्रुस र अरू चेलाहरूले भर्खरै बुझ्न थालेका थिए। तर उनीहरूले अझै बुझ्दैनन् कि येशू मसीह हुनुहुन्छ जसले सेवा र उद्धारको लागि कष्ट भोग्नुहुनेछ। उनीहरूले परमेश्वरको राज्यको उच्च मूल्य बुझ्दैनन् - जुन राज्यको राजा हुनको लागि आफ्नो जीवन समर्पणको साथ येशूले तिर्नुभएको मूल्य। न त तिनीहरू बुझ्दछन् कि येशूका चेलाहरू परमेश्वरको राज्यमा नागरिक बन्नको निम्ति उनीहरूलाई के लाग्छ।
यो हामी कसरी परमेश्वरको राज्यमा पहुँच खरीद गर्न सक्छौं भन्नेको बारेमा होइन - यो येशूसँग उहाँको शाही जीवनमा बाँड्न र यस प्रकारले हाम्रो जीवनलाई उहाँको राज्यमा जीवन बिताउने तरीकाको बारेमा छ। यसको लागि तिर्नु पर्ने मूल्य छ, र मार्कले यस भागमा येशूका छवटा गुणहरू हाईलाइट गरेर देखाउँछन्: प्रार्थनापूर्वक निर्भरता, आत्म-इन्कार, विश्वास, उदारता, नम्रता, र स्थिर विश्वास। हामी सबै छ वटा सम्पत्ती हेर्नेछौं, चौथोमा विशेष ध्यान दिदै: उदारता।
पहिले हामी मर्कूस ९:१४-३२ मा जान्छौं। येशू दुइटा कुराबाट दुखी हुनुहुन्छ: एकातिर, यो व्यवस्थाका शिक्षकहरू भेट्ने प्रतिरोध हो र अर्कोतर्फ, यो अविश्वास हो कि उहाँले सबै धेरै मानिसहरू र उहाँका आफ्नै चेलाहरूमा देख्नुहुन्छ। यस खण्डको पाठ यो हो कि परमेश्वरको राज्यको विजय (रोग माथि यस अवस्थामा) हाम्रो विश्वासको स्तरमा निर्भर गर्दैन, तर विश्वासको स्तरमा जुन पछि येशूले पवित्र आत्माद्वारा हामीसँग साझा गर्नुहुन्छ।
यस वातावरणमा जहाँ मानव कमजोरीहरूको चिन्ता छ, येशू बताउनुहुन्छ कि परमेश्वरको राज्यको उच्च लागतको एक भाग उहाँमा निर्भरताको मनोवृत्तिसहित प्रार्थना गर्नु हो। कारण के हो? किनकि उहाँ मात्र हाम्रो जीवनको लागि हाम्रो जीवन बलिदान दिएर परमेश्वरको राज्यको पूर्ण मूल्य तिर्नुहुन्छ। दुर्भाग्यवस, चेलाहरूले त्यो अझै बुझ्न सकेनन्।
मर्कूस::-9,33-50० ले अगाडि चेलाहरूलाई देखाउँदछ कि परमेश्वरको राज्यको लागतको एक अंश भनेको सर्वोच्चता र शक्तिको लागि तपाईंको आफ्नै चाहना त्याग्नु हो। आत्म-अस्वीकार भनेको त्यो राज्य हो जसले परमेश्वरको राज्यलाई महान बनाउँछ, जसलाई येशूले कमजोर, असहाय बच्चाहरूको सन्दर्भमा वर्णन गर्नुहुन्छ।
येशूका चेलाहरूले आफूलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्न असमर्थ थिए, त्यसैले यो सल्लाहले येशूलाई औंल्यायो जो आफैंमा सिद्ध छ। हामीलाई उहाँमा विश्वास गर्न बोलाइएको छ - उहाँको व्यक्तित्वलाई स्वीकार्न र परमेश्वरको राज्यबाट उहाँको जीवन शैली अनुसरण गर्न। येशूलाई पछ्याउनु भनेको सब भन्दा महान वा सब भन्दा शक्तिशाली बन्नको बारेमा होइन, तर मानिसहरूलाई सेवा गरेर आफूलाई परमेश्वरको सेवा गर्न इन्कार गर्ने बारेमा हो।
मर्कूस 10,1: 16- ले वर्णन गर्दछ कि कसरी येशूले विवाहलाई परमेश्वरको राज्यको उच्च मूल्यमा निकटतम सम्बन्धहरूमा विश्वासयोग्यता समावेश गर्दछ भनेर देखाउन प्रयोग गर्नुभयो। त्यसपछि येशूले स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि कसरी निर्दोष साना बच्चाहरूले सकारात्मक उदाहरणहरू बसाल्छन्। केवल बच्चाको सरल विश्वास (विश्वास) संग परमेश्वरको राज्य प्राप्त गर्नेहरूले मात्र वास्तवमा यो अनुभव गर्दछ कि यो परमेश्वरको राज्यको हो।
जब येशू फेरि बाहिर जानुभयो, एक जना मानिस दौडेर आयो र घुँडा टेकेर उसको अघि घोप्टो पर्यो र सोध्यो: "हे उत्तम गुरु, अनन्त जीवन पाउन मैले के गर्नु पर्छ?" तिमीले मलाई किन राम्रो भन्छौ? "भगवान मात्र असल हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। तिमीले आज्ञाहरू जान्दछौ: हत्या गर्नु हुँदैन, व्यभिचार गर्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन, कसैको हत्या गर्नु हुँदैन, कसैलाई मार्नु हुँदैन, तपाईको बाबु-आमालाई सम्मान गर्नु पर्छ। गुरु, मानिसलाई उत्तर दिए, मैले युवावस्थादेखि नै यी सबै आज्ञाहरू पालन गरेको छु। येशूले उसलाई मायाले हेर्नुभयो। उनले भने, एउटा कुरा अझै हराइरहेको छ: जाऊ र आफूसँग भएको सबै बेचेर गरीबहरूलाई पैसा बाँडिदेऊ र स्वर्गमा तिम्रो भण्डार हुनेछ। र त्यसपछि आएर मलाई पछ्याउनुहोस्! यो सुनेर त्यो मानिस गहिरो प्रभाव पा .्यो र दुखको साथ छोडे किनकि उसको ठूलो भाग्य थियो।
येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई एक एक गरी हेर्नुभयो र भन्नुभयो: परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न धेरै धेरै मानिसहरूको लागि कति गाह्रो छ! उहाँका वचनले चेलाहरु डराए। तर येशूले फेरि भन्नुभयो: बच्चाहरू, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न कति गाह्रो छ! भगवानको राज्यमा प्रवेश गर्न धनी मानिस भन्दा ऊँट सियोको आँखाबाट जाने सम्भावना बढी हुन्छ। उनीहरु झनै डराए । त्यसोभए कसले मुक्ति पाउन सक्छ? येशूले उसलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो: यो मानिसहरु संग असम्भव छ, तर भगवान संग छैन; भगवान को लागी केहि पनि सम्भव छ। तब पत्रुसले येशूलाई भने: तिमीलाई थाहा छ, हामीले सबै कुरा छोडेर तिम्रो पछि लाग्यौं। येशूले जवाफ दिनुभयो: म तिमीलाई भन्छु: मेरो र सुसमाचारको खातिर घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, बुबा, छोराछोरी वा खेत छोड्ने सबैले सय गुणा बढी फिर्ता पाउँछन्: अहिले, यस समयमा, घरहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, आमाहरू, बच्चाहरू र खेतहरू - सतावटमा भए पनि - र आउने संसारमा, अनन्त जीवन। तर धेरै जो पहिले पहिले छन् अब अन्तिम हुनेछन्, र अन्तिम पहिलो हुनेछन् "(मार्क १०: १-10,17-३१, नयाँ जेनेभा अनुवाद)।
यहाँ येशूले परमेश्वरको राज्यको उच्च मूल्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। येशूतिर फर्कने धनी मानिससँग सबै थोक थियो तर वास्तवमा के महत्त्वपूर्ण छ: अनन्त जीवन (परमेश्वरको राज्यमा जीवन)। उहाँ यो जीवन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर यसको स्वामित्वको लागि ऊ ठूलो मूल्य तिर्न तयार छैन। आफ्नो हातमा भएको कुरा छोड्न तयार नभएको कारणले आफ्नो हात जालबाट निकाल्न नसक्ने बाँदरको चर्चित कथामा पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले धनी मानिस पनि भौतिक सम्पतिको आफ्नो निर्धारणबाट अलग हुन तयार छैनन्।
यद्यपि उहाँ स्पष्ट रूपमा मायालु र उत्सुक हुनुहुन्छ; र निस्सन्देह नैतिक रूपमा ईमानदार, धनी मानिसले येशूलाई (जो अनन्त जीवन हो) लाई पछ्याउँछ भने (उनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै) यसको लागि के अर्थ हुन्छ सामना गर्न असफल हुन्छ। तेसैले धनी मानिस दु: खी येशू लाई छोड्छ र हामी अब उहाँ बाट सुन्दैनौं। उसले आफ्नो छनौट गर्यो, कम्तिमा त्यतिखेर।
येशूले त्यस मान्छेको अवस्थाको मूल्या and्कन गर्नुहुन्छ र आफ्ना चेलाहरूलाई बताउनुहुन्छ कि धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्न धेरै गाह्रो हुन्छ। वास्तवमा, यो परमेश्वरको मदतबिना पूर्ण रूपमा असम्भव छ! यसलाई विशेष गरी ज्वलन्त बनाउनको लागि येशू एउटा हास्यास्पद भनाइको प्रयोग गर्नुहुन्छ - बरु ऊँट सियोको आँखाबाट जान्छ!
येशूले यो पनि सिकाउनुहुन्छ कि गरिबहरूलाई पैसा दिनु र परमेश्वरको राज्यको लागि हामीले गर्ने अन्य बलिदानहरूले हाम्रो लागि भुक्तान गर्नेछ (खजाना सिर्जना गर्नुहोस्) - तर स्वर्गमा मात्र, पृथ्वीमा होइन। हामी जति दिन्छौं, उति धेरै पाउनेछौं। यद्यपि, यसको मतलब यो होइन कि हामीले स्वास्थ्य र धनको सुसमाचार प्रचार गर्ने केही समूहहरूले सिकाएको रूपमा हामीले परमेश्वरको काममा दान गरेको पैसाको बदलामा हामीले धेरै पाउँछौं।
येशूले सिकाउनुभएको कुराको अर्थ हो कि परमेश्वरको राज्यमा आध्यात्मिक इनामहरू (अहिले र भविष्यमा) हामीले येशूलाई पछ्याउनको लागि अहिले गर्न सक्ने कुनै पनि त्यागहरू भन्दा धेरै हुनेछ, भले पनि निम्नमा आवश्यकता र सतावटको समयहरू समावेश छन्।
यी कठिनाइहरूको बारेमा कुरा गर्दा, येशूले आफ्नो आउँदो कष्टको बारेमा अर्को घोषणा थप्नुभयो:
"तिनीहरू यरूशलेमतिर जाँदै थिए; येशू अगाडि जानुभयो। चेलाहरू असहज थिए, र तिनीहरूसँग जाने अरूहरू पनि डराएका थिए। उहाँले बाह्र जनालाई फेरि एकै ठाउँमा लगेर उहाँलाई के हुनेछ भनेर तिनीहरूलाई घोषणा गर्नुभयो। "हामी अब यरूशलेम जाँदैछ, उहाँले भन्नुभयो। "त्यहाँ मानिसको पुत्र प्रमुख पुजारीहरु र शास्त्रीहरु को शक्ति मा दिइएको छ। तिनीहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको दोषी ठहराउनेछन् र उसलाई अन्यजातिहरुलाई सुम्पनेछन् जो परमेश्वरलाई चिन्दैनन्। तिनीहरूले उसलाई गिल्ला गर्नेछन्, उसलाई थुक्नेछन्, कोर्रा हान्नेछन् र अन्तमा उसलाई मार्नेछन्। तर तीन दिन पछि ऊ बौरी उठ्नेछ" (मार्क १०:३२-३४, नयाँ जेनेभा अनुवाद)।
येशूको व्यवहारमा केहि थियो, तर उनको शब्दहरूमा पनि, चेलाहरूलाई चकित पार्छ र उनीहरूलाई पछ्याउने भीडलाई डराउँछ। कुनै किसिमले उनीहरूले महसुस गरे कि एउटा स im्कट निकट छ र यो त्यस्तो नै हो। येशूका शब्दहरू एक जीवंत अनुस्मारक हो जसले अन्ततः परमेश्वरको राज्यको लागि धेरै उच्च मूल्य तिर्दछ - र येशूले हाम्रोनिम्ति यो गर्नुभयो। यसलाई कहिल्यै नबिर्सौं। उहाँ सबैभन्दा उदार हुनुहुन्छ र हामीलाई उदारतामा भाग लिन उहाँलाई पछ्याउन भनिन्छ। कुन कुराले हामीलाई येशूजस्तो उदार हुनदेखि जोगाउँछ? यो त्यस्तो चीज हो जसको बारे हामीले सोच्नु पर्छ र प्रार्थना गर्नुपर्छ।
परमेश्वरको राज्यको उच्च मूल्यमा रहेको अनुभागमा हामी मर्कूस १०: 10,35 45 मा आउँछौं। जब्दीका छोराहरू, याकूब र यूहन्ना येशूलाई उहाँको राज्यमा उच्च स्थानको खोजी गर्न जान्छन्। यो विश्वास गर्न गाह्रो छ कि तिनीहरू आफैंलाई अगाडि बढाउँदै छन् र यति आत्म-केन्द्रित छन्। यद्यपि हामीलाई थाहा छ कि यस्तो मनोवृत्तिहरू हाम्रो पतित मानव प्रकृतिमा गहिरो जरा गाडिएका छन्। यदि ती दुई चेलाहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा त्यस्तो उच्च ओहदाको वास्तविक मूल्यको बारे थाहा छ भने, तिनीहरूले येशूलाई यो अनुरोध गर्ने आँट गरेनन्। येशूले उनीहरूलाई दुःखकष्ट भोग्न चेतावनी दिनुहुन्छ। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि यसले तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा उच्च ओहदा दिनेछ किनकि सबैले कष्ट भोग्नु परेको छ। परमेश्वर मात्र एक उच्च पदको हकदार हुनुहुन्छ।
निस्सन्देह जेम्स र जोन जस्ता आत्म-केन्द्रित अन्य चेलाहरू तिनीहरूको आग्रहमा रिसाए। शक्ति र प्रतिष्ठा को यी पदहरु शायद एक चाहन्थ्यो। त्यसकारण येशू फेरि एकपल्ट धैर्यतापूर्वक तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको बिल्कुलै भिन्न मान बताउनुहुन्छ, जहाँ साँचो महानता नम्र सेवामा देखिन्छ।
येशू यस नम्रताको प्रमुख उदाहरण हुनुहुन्छ। यशैया 53 मा भविष्यवाणी गरिएझैं "धेरै जनाका निम्ति छुडौती" भइसकेका उनी परमेश्वरको कष्टमा परेका सेवकको रूपमा आफ्नो जीवन दिन आएका थिए।
हाम्रो विषयको खण्ड मर्कूस १०: 10,46 52-२ मा अन्त हुन्छ, जहाँ येशू र उहाँका चेलाहरू यरीहोबाट यरूशलेम जाँदा कसरी दुःख भोग्नुहुनेछ र मर्नुहुनेछ भनेर वर्णन गरिएको छ। बाटोमा तिनीहरू बर्तिमैस नाम गरेको अन्धा मानिसलाई भेट्छन् जसले येशूलाई दयाको निम्ति बोलाउँदछन्। येशूले अन्धो मान्छेको दृष्टि दिनुहुन्छ र "तिम्रो विश्वासले तिमीलाई मदत गरेको छ" भन्दै जवाफ दिन्छ। त्यसपछि बार्टिमियस येशूसँग मिल्छ।
पहिलो, यो मानव विश्वास मा एक पाठ हो, जुन अपूर्ण छ र अझै यो प्रभावी छ भने यो लगातार छ। अन्तमा, यो येशूको दृढ विश्वासको बारेमा हो।
यस समयमा परमेश्वरको राज्यको उच्च मूल्यलाई फेरि उल्लेख गर्नुपर्दछ: प्रार्थनापूर्वक निर्भरता, आत्म-अस्वीकार, वफादारी, उदारता, नम्रता र स्थिर विश्वास। जब हामी यी गुणहरू स्वीकार्छौं र अभ्यास गर्छौं तब हामी परमेश्वरको राज्यको अनुभव गर्छौं। के त्यो थोरै डरावना लाग्दछ? हो, जबसम्म हामी यो महसुस गर्दैनौं कि यी येशू आफैंका गुणहरू हुन् - ती गुणहरू जुन उसले पवित्र आत्मा मार्फत उहाँमा विश्वास राख्दछ र जसले उहाँमा विश्वास राख्छन्।
येशूको राज्यमा हाम्रो जीवनमा भाग लिने काम कहिल्यै सिद्ध हुँदैन, तर जब हामी येशूलाई पछ्याउँछौं, त्यो हामीतर्फ "ट्रान्सफर हुन्छ"। त्यो इसाई उत्तराधिकारको तरिका हो। यो परमेश्वरको राज्यमा ठाउँ कमाउने बारेमा होइन - हामी येशूमा त्यो स्थान पाउँदछौं। यो परमेश्वरको अनुमोदन कमाउनको बारेमा होइन - येशूसँग धन्यवाद हामीसँग परमेश्वरको निगाह छ। यो हामी येशूको प्रेम र जीवन मा साझा महत्त्वपूर्ण छ। उहाँसँग यी सबै गुणहरू पूर्ण र विपुलतामा छन् र ती हामीसँग बाँड्न तयार हुनुहुन्छ, र पवित्र आत्माको सेवामार्फत उहाँ जे गर्नुहुन्छ त्यसरी नै हो। प्रिय साथीहरू र येशूका अनुयायीहरू, आफ्नो हृदय र येशूमा तपाईंको पूरा जीवन खोल्नुहोस्। उहाँलाई पछ्याउनुहोस् र उहाँबाट प्राप्त गर्नुहोस्! उहाँको राज्यको पूर्णता आउनुहोस्।